Itoobiya Oo Gacanta ku Dhigtay $40 Milyan Oo Beesha Caalamku Kaga Taageertay Doorashada Iyo Wasiir Ahmed Shide Oo Ka Hadlay - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaItoobiya Oo Gacanta ku Dhigtay $40 Milyan Oo Beesha Caalamku Kaga Taageertay Doorashada Iyo Wasiir Ahmed Shide Oo Ka Hadlay
Addis Ababa (Jigjigaonline) – Guddida doorashooyinka Itoobiya ayaa gacanta ku dhigay lacag dhan 40 milyan oo dollar oo beesha caalamku kaga caawisay qabsoomidda doorashooyinka la filayo inay guud ahaan dalka ka qabsoomaan bisha May ee sannadka dambe.
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan horumarinta iyo 11 waddan oo reer Galbeed ah ayaa heshiis kula galay wasaaradda maaliyadda ee Itoobiya iyo Guddida Doorashooyinka in la siiyo lacag dhan 40 milyan oo dollar oo qaadhaan ah, taas oo ay kaga taageerayaan doorashooyinka & hirgelinta hannaanka iyo isbeddelka dimuquraadiga ah ee dalka ka hana-qaaday.
$34.6 milyan oo ka mid ah lacagtan ayaa waxa bixinaya 11 wada-jir u bixinaya 11 waddan oo deeq-bixiyeyaal ah, $2 milyan oo kalena waxa ku daraysa hay’adda UNDP.
Waddamadan ayaa ku wargeliyey Itoobiya inay ku xisaabtamaan lacagtan oo ay gacanta kasoo gelin doonaan bilaha soo socda, si adagna ay u garab istaagayaan isbeddellada iyo hannaanka dimuquraadiyadda ee Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed ka hirgeliyey dalka.
“Tan iyo markii la magacaabay boodhka, UNDP ayaa si dhow ugala shaqaynaysay, kuna caawinaysay barnaamijiyo ay ku taageerayso.” Sidaa waxa tidhi Biritukan Mideksa oo ah guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Itoobiya oo ka hadlaysay madashii lacagta loogu ballan-qaaday.
Wasiirka Maaliyadda Itoobiya, Ahmed Shide oo isaguna madashaas ka hadlay ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in laga faa’iidaysto fursadaha isbeddelka ee dalka ka hirgalay, taas oo gaadhay heer dimuquraadiyad lagaa hirgelinayo dalka, ayna qabsoomayaan doorashooyin xor iyo xalaal ah.